Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်)
Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Levothyroxine ဟာ သိုင်းရွိုက် ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကိုယ်ခန္ဓါက သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း အလုံအလောက် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါ အစားထိုးအဖြစ် အသုံပြုပါတယ်။
Berlthyrox® ကို သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းခြင်းကို ကုသဖို့နဲ့ လည်ပင်းကြီးရောဂါအချို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ သူ့ကို သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာအချို့အမျိုးအစားတွေမှာလည်း ခွဲစိတ်ကုသမှုနဲ့ အခြားဆေးတွေနဲ့အတူ အသုံးပြုပါတယ်။
Levothyroxine ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ အခြား အခြေအနေများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
မနက်စာ မစားခင်မှာ တစ်နာရီကနေ တစ်နာရီခွဲလောက်ကြိုပြီး ဗိုက်ထဲ အစာမရှိခင်မှာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
Thyroxine သောက်ပြီး လေးနာရီအတွင်းမှာ သံဓါတ် (သို့) ကယ်လ်ဆီယမ်ပါတဲ့ antacid (သို့) အခြားဆေးတစ်မျိုးမျိုး သောက်သုံးခြင်း မပြုရပါဘူး။
လူနာက ကလေးဖြစ်ပြီး ဆေးကို တစ်လုံးလုံး မမြိုချနိုင်ဘူးဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့ဆေးပမာဏကို ခြေပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ခြေထားတဲ့ဆေးထဲကို ရေ လက်ဖက်ရည်ဇွန် တစ်ဇွန်းကနေ နှစ်ဇွန်းအထိထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ ဇွန်း (သို့) အစက်ချစက်ကို မြန်မြန် အသုံးပြုပြီး တိုက်ကျွေးပေးပါ။ ဒီဆေးရည်အရောကို နောက်နေ့အတွက် ချန်မထားပါနဲ့။ ခြေထားတဲ့ဆေးတွေကို soybean infant formula နဲ့ မရော လိုက်ပါနဲ့။ မေးခွန်းတွေမေးစရာ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးဟာ နေ့တိုင်း အချိန်မှန်သောက်သုံးမှန်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
နေမကောင်းဘူးဆိုရင်တောင် ဒီဆေးကို ဆက်လက်သောက်ပါ။ ဆေးမသောက်ပဲ မနေပါနဲ့။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ မသက်သာခင် ရက်သတ္တပတ် အချိန်အတော်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင် ခြင်း မရှိပဲ ဆေးပမာဏကို ပြောင်းခြင်း (သို့) ဆေးရပ်လိုက်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Levothyroxine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Levothyroxine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Levothyroxine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Levothyroxine ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ယေဘူယျအသိပေးချက် – ဆေးဝါးအများစုကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်း ခြင်းတော့ မပြုလုပ်ရပါ
Levothyroxine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ် နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Levothyroxine ကို အဝလွန်ရောဂါတွေ (သို့) ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း ပြဿနာတွေအတွက် အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ Levothyroxine ကိုမှားယွင်းစွာ အသုံးပြုမှုကြောင့် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အခြားကိုယ်အလေးချိန်ကျ ဆေးတွေနဲ့ အစားမစားချင်အောင် သောက်တဲ့ ဆေးတွေ သောက်သုံးနေရင် ပိုဆိုးပါတယ်။
Thyroid horme ဟာ ကိုယ်ခန္ဓါမှာ သဘာဝအတိုင်းရှိတဲ့ အရာဖြစ်တာကြောင့် လူတိုင်းသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့ရောဂါတွေ ရှိရင်တော့ သောက်လို့ ရချင်မှ ရပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Levothyroxine ဟာ မမွေးသေးတဲ့ ကလေးငယ်အတွက်တော့ အန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ ဒီဆေးသောက်နေစဉ်ကိုယ်ဝန်ရှိသွားရင် ဆရာဝန် မရပ်ခိုင်းပဲ ဆေးကို မရပ်တန့်သင့်ပါဘူး။ thyroid hormone ပမာဏ နည်းခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ မိခင်ရော ကလေးကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ပမာဏတော့ ကွာခြားကောင်း ကွာခြားပါလိမ့်မယ်။
Levothyroxine ဟာ မိခင်နို့ကို ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးကိုတော့ ထိခိုက်မှု မရှိပါဘူး။ နို့တိုက်နေတဲ့ ကလေးရှိတယ်ဆိုရင် ဒီဆေးကို ဆရာဝန်ကို အသိမပေးပဲ မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။ နို့တိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာတော့ ဆေးပမာဏကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်။
Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆိုးကျိုးတွေရှိရင် အရေးပေါ် အကူအညီယူသင့်ပါတယ်။
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများ ( အကွက်ထခြင်း၊ယားခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ရုတ်တရက် နီလာခြင်း၊ ရင်ဘတ်ထဲ တင်းကျပ်ခြင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသံသြလာခြင်း)
မြန်သော (သို့) ပုံမှန်မဟုတ်သော နှလုံးခုန်နှုန်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ (စိတ်ပူခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ ဂနာမငြိမ် ဖြစ်ခြင်း)
ပြင်းထန်သော ခေါင်းကိုက်ခြင်း (သို့) ပင်ပန်းခြင်း
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြု လုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Levothyroxine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Levothyroxine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Levothyroxine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အောက်ပါ အခြေအနေတွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ သွေးခဲမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
pituitary gland ပြဿနာများ
ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ( အစားအသောက်၊ ဆေး)
ကုသခြင်း မရှိသော အက်ဒရီနယ်ဂလန်းပြဿနာများ
နှလုံးရပ်ခြင်း (သို့) နှလုံးရပ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Hypothyroidism (သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းသော ရောဂါ) အတွက် ပုံမှန် ဆေးပမာဏ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ hypothyroidism ရောဂါအတွက်။ သောက်ဆေး 1.7 mcg/kg/day (ဥပမာ- ၇၀ ကီလိုဂရမ်ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက် အတွက်100 to 125 mcg/day) ။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ 1 mcg/kg/day ထက်နည်းပြီး လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။. 200 mcg/day ထက်များတဲ့ ပမာဏကတော့ လိုအပ်ခဲပါတယ်။
အသက်ငါးဆယ်အထက် (သို့) နှလုံးရောဂါ ရှိသော အသက်ငါးဆယ်အောက်။ ကနဦးဆေး ပမာဏ ကတော့ 25 to 50 mcg/day ဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ၆-၈ ပတ်ခြားတစ်ခါ ဆေးပမာဏလိုအပ်သလို တိုးတိုးသွားသည်။
ပြင်းထန်သော hypothyroidism ရှိတဲ့ လူနာများ။ ကနဦးဆေးပမာဏကို 12.5မှ 50 mcg သောက်ဆေး တစ်ရက်တစ်ကြိမ် ထို့နောက် ဆေးပမာဏကို 12.5 မှ 25 mcg/day ၂-၄ ပတ်တစ်ခါ တိုးသွားသည်။
Secondary (pituitary) (သို့) tertiary (hypothalamic) hypothyroidism ရှိတဲ့ လူနာများ ။ သောက်ဆေးပမာဏကို လူနာရောဂါလက္ခဏာများပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားချိန် ၊ serum free-T4 ပမာဏပုံမှန်အတွင်းဝင်သွားချိန်ထိဆေးကို ချိန်ညှိသွားသည်။
TSH suppression အတွက် ပမာဏ
ဆေးပမာဏကတော့ ရောဂါအခြေအနေနဲ့ လူပေါ်မူတည်ပါတယ်။
Myxedema coma အတွက် ဆေးပမာဏ
စစချင်း ပမာဏ: 300 to500 mcg အကြောဆေး။
နောက်ပိုင်း ပမာဏ: 50 and100 mcg အကြောဆေး ကို လူနာသောက်ဆေးကို ခံနိုင်ရည်ရှိလာသည်အထိပေးသည်။
Hypothyroidism အတွက် ဆေးပမာဏ
Initial dose: 12.5 to 25 mcg သောက်ဆေး တစ်ရက်တစ်ကြိမ်ဖြင့် ၄-၆ ပတ်ခြားတစ်ခါဆေးပမာဏ တဖြည်းဖြည်းတိုးသွားသည်။
primary hypothyroidism ခံစားနေရသောလူနာ ရောဂါလက္ခဏာများပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ချိန်ထိ ၊ serum TSH ပုံမှန် ပမာဏဖြစ်ချိန်ထိဆေးပမာဏကို 12.5 to 25 mg ကြား ချိန်ညှိတိုးသွားသည်။
ကလေးတွေအတွက် Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်ေ လာက်လဲ
မွေးရာပါ (သို့) နောက်ပိုင်းမှဖြစ်သော Hypothyroidismရောဂါအတွက်
မွေးကင်းစကလေး ။10 to 15 mcg/kg/day ။ အကယ်၍လူနာသည် နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသောရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ရှိသည်ဆိုလျှင် ဆေးပမာဏ နည်းနည်း နဲ့စပါ။ ပြင်းထန်သောhypothyroidism ရောဂါများတွင် 12 to 17 mcg/kg/day ဆေးပမာဏ များများနဲ့စတင်သည်။
၃ လအောက်ကလေး။10 to 15 mcg/kg သောက်ဆေးတစ်ရက်တစ်ကြိမ် ။ အကယ်၍ ကလေးသည် နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသောရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ရှိသည်ဆိုလျှင် ဆေးပမာဏ နည်းနည်း တစ်ရက်ကို ခန့်မှန်းချေ 25mcg လောက် နဲ့စပါ။ အကယ်၍ ကနဦး serum T4 ပမာဏအရမ်းနည်းနေလျှင် (5 mcg/dl အောက်) ခန့်မှန်းချေ တစ်ရက်ကို 50 mcg ဆေးပမာဏ များများနဲ့စတင်ပါ။
၃ လမှ ၆ လ ထိ ။8 to 10 mcg/kg/day
၆ လမှ ၁၂ လ ထိ။6 to 8 mcg/kg/day
၁ နှစ် မှ ၅ နှစ်ထိ ။5 to6mcg/kg/day
၆ နှစ် မှ ၁၂ နှစ်ထိ။4 to5mcg/kg/day
၁၂ နှစ် နှင့် အထက် ။2to3mcg/kg/day
အပျိုဖော်၊ လူပျိုဖော်ဝင်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြည့်စုံပြီးသော လူနာအတွက် ။ 1.7 mcg/kg/day
နာတာရှည် (သို့) ပြင်းထန် hypothyroidismရောဂါအတွက်
25 mcg သောက်ဆေး တစ်ရက်တစ်ကြိမ် ။ လိုအပ်သလိုမျိုး ဆေး ပမာဏ ကို ၂-၄ ပတ်ခြားတစ်ခါ တိုးတိုးသွားသည်။
Berlthyrox (ဘာလ်သိုင်းရော့စ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Levothyroxine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေးပြား Levothyroxine Sodium 100 mcg
Levothyroxine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏ နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
နွားနို့၊ ပဲနို့နဲ့ အုန်းနို့ ဘယ်ဟာက ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုအကျိုးပြုသလဲ ။ ။